ကော့ပါနီဆီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ကော်ပါနီဆီယမ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ရွန့်ဂန္နီယမ် ← ကော့ပါနီဆီယမ် → နီဟိုနီယမ်
alternatively consideredatransition metal; may have similarities with the noble gases
နီကိုလာ့စ် ကော်ပါးနိကပ်စ် ကိုအစွဲပြု၍
အတည်ငြိမ်ဆုံး ကော့ပါနီဆီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 0.18 s α 10.28 277Ds
syn 4.2 s 90% α 9.53, 9.32, 8.94 279Ds
syn 28 s α 9.15, 9.03? 281Ds
ကော့ပါနီဆီယမ် (Copernicium) ကို ယခင်က periodic ဇယား၌ယာယီအမည် Ununbium အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သေးသည်။ ၎င်း၏ သင်္ကေတမှာ Cn ဖြစ်ပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ် (atomic number) ၁၁၂ ဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်၏ တည်နေရာသည် column အမှတ်စဉ် ၁၂ ရှိ Mercury ဒြပ်စင်၏အောက်၌ တည်ရှိသည်။ ၎င်းဒြပ်စင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိ(Physical properties)အရ လေးလံသောသတ္တုဖြစ်ပြီး ဒြပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိ(Chemical properties)အရ အုပ်စုနံပါတ်(၁)နှင့်(၂)ရှိMetalများကဲ့သို့ မတည်မြဲစွာဖြင့် ဓာတ်တိုးခြင်းအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ Periodic ဇယားအတွင်းတည်ရှိပုံအနေအထားအရ ၎င်းဒြပ်စင်သည် Mercury ဒြပ်စင်ကဲ့သို့ ပိုမိုအငွေ့ပြန်လွယ်သော အရည်ပုံသဏ္ဍန်ဒြပ်စင်တခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းကြသည်။
ကော့ပါနီဆီယမ် ဒြပ်စင်၏သက်တမ်းဝက်(half-life)သည် ဝ.၂၄မီလီစက္ကန့်ခန့် အလွန်တိုသောကြောင့် ပတ်ဝန်ကျင်သို့ ၎င်းဒြပ်စင်၏သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုပါ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ Mewes, J.-M. (2019). "Copernicium isaRelativistic Noble Liquid". Angewandte Chemie International Edition. doi:10.1002/anie.201906966.
↑ "Super heavy element Copernicium: Cohesive and electronic properties revisited" (January 2018). Solid State Communications 269: 16–22. doi:10.1016/j.ssc.2017.10.009.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကော့ပါနီဆီယမ်&oldid=722946" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။